अघिल्लो कार्यकालमा सुरु भएका काम अब पूरा गर्छु: महानगर प्रमुख महर्जन - Nepal Bahas Nepal Bahas
अघिल्लो कार्यकालमा सुरु भएका काम अब पूरा गर्छु: महानगर प्रमुख महर्जन
प्रकाशित मिति : १२ जेष्ठ २०७९, बिहीबार १६:१८
♦सञ्चिता घिमिरे र चन्द्रकला थापा
ललितपुर, १२ जेठ । कलाको नगरी ललितपुर महानगरपालिकामा दोस्रो कार्यकालका लागि चिरीबाबु महर्जन नगर प्रमुखमा निर्वाचित भएका । काठमाडौं महानगरपालिकामा युवा अनुहारका रुपमा प्रमुख र उपप्रमुख निर्वाचित हुँदै गर्दा ललितपुरमा भने पाका व्यक्ति नै दोहोरिका छन्। पहिलो कार्यकालमा महानगरमा भएका विकासका काम र सरल व्यक्तित्वकै कारण उनी पुनस् विजयी भएका छन ।
महानगरवासी बताउँछन् । विगतमा तीन पटकसम्म वडाध्यक्षका रुपमा काम गरेका थिए उनले ज्यापु समाजको अध्यक्ष भएर काम गरेका थिए । प्रमुखका रुपमा निर्वाचित भएपछि अबका पाँच वर्षका यहाँका मुख्य प्राथमिकताका क्षेत्रहरु केके हुन ? पहिलो कुरा मेले आफैँले पहिले सुरु गरेका काम पूरा गर्नुपर्छ । एशियाली विकास बैंकसँग रु ५४ करोड अनुदानमा सम्पदा क्षेत्रमा ट्र्याक लाइन परियोजना अघि बढेको छ ।
यो काम अहिलेसम्म ६० प्रतिशत सकियो र ४० प्रतिशत बाँकी छ, त्यो सकाउनुपर्छ । अहिले बेस्सरी पानी पर्दा पाटन दरबार क्षेत्रमा जलमग्न बन्छ । ढुङ्गेधारामा पानी जम्छ । परियोजना पूरा भएपछि त्यो हट्नेछ । दोस्रोमा राजदल गणसँग समझदारी गरेर ३० रोपनी जग्गा फिर्ता लिइएको छ । त्यो जग्गा लगनखेलको अशोक स्तूपाको दक्षिण र पश्चिममा पर्छ । त्यहाँको पोखरीमा साढे दुई वर्षमा कमलका फूल फुलाउने लक्ष्य छ । त्यो ठाउँमा उत्तरमा सप्तपाताल पोखरी छ र सेनाको क्षेत्रमा रहेको पोखरी गरी जम्मा ४५ रोपनी जग्गा त्यहाँ छ ।
त्यहाँ ‘ग्रिन एण्ड ब्ल्यु फ्युजन प्रोजेक्ट’ बनाउने योजना छ । त्यसका लागि अध्ययन भइसकेको छ । सेनाको क्षेत्रमा भित्र जान नसकिने भएकाले बाहिरबाट हेर्न मिल्ने गरी बार लगाइनेछ ।
ललितपुरमा भएका कला, संस्कृतिको संरक्षण र पर्यटन प्रवद्र्धनका योजना केके रहेका छन् रु
अधिकांश वडामा खानेपानीको समस्या ज्युँका त्याे छ ? त्यसको समाधानको योजना के छ ?
काठमाडौँ उपत्यकामा मेलम्ची आयो र पुनस् रोकियो, हाम्रोमा खानेपानीको समस्या छ । मेलम्चीमा पचासौँ वर्षमा परेकोभन्दा बढी पानी परेकाले आयोजनामा क्षति भयो । काठमाडौँ उपत्यकामा ५० औँ लाख बस्छन् यहाँ एउटै स्रोतबाट पानी खुवाउँछु भन्दा त्यो जोखिमपूर्ण हुन्छ । हामीले खानेपानीको वैकल्पिक स्रोत विचार गर्नुपर्छ भनेर गोदावरी र महालक्ष्मी नगरपालिकासँग मिलेर काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडसँगको प्राविधिक डिजाइनमा मकवानपुरको सिस्नेरी खोलाबाट पानी ल्याउन काम सुरु गर्न बजेट व्यवस्थापन गरेका थियौँ । अहिले सिस्नेरी खोलाबाट पानी खेर गरेको छ त्यो ल्याउँदा दैनिक १३ करोड लिटर पानी ल्याउन सकिने अध्ययनले देखाएको छ ।